Cinefy ọkachamara iPhone Video na-edezi | Martech Zone
Na Mọnde, Nọmba 29, 2011 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Otu mpaghara ahia ọdịnaya anyị na-achọ ịbawanye bụ ojiji nke vidiyo. M na a na-ekiri otú ndị ọzọ na-ede blọgụ nwere tinye n'ọrụ video ma m maa m a bit nke a snob… M chọrọ ihe ka mma. Anyị niile na igwefoto HD na ngwa ọrụ na-agagharị na igwe dị mfe iji, yabụ gịnị kpatara m ga-akụtu ụfọdụ okwu vidio vidio nke mụ na mmadụ nwere ma kpoo ya na blọgụ a na anyị arụsiwo ọrụ ike iji ruo ebe dị elu ogo nke mma?
Ọ dị ka ihe ga - adị mfe n'oge na - adịghị anya maka ndị ọrụ nke iPhone, yana ịhapụ beta dị oke Cinefy n'ahịa. A bụ ihe a ngwaahịa tii nke ụdị edezi na ike-emezu…-ekwe ka ị dezie video, tinye mmetụta, na ọbụna họrọ nwebisiinka-free soundtracks.
Cinefy bụ a mobile video edezi na mmetụta n'elu ikpo okwu maka iPhone ebe ọrụ ike ma na-eso videos weere na elu àgwà visual mmetụta. Cinefy na-enye ndị ọrụ ike na-enweghị ikike edezi iji tinye eserese ngwa ngwa, gbakwunye egwu, ma tinye nsonaazụ anya dị egwu yana interface ya dị mfe ma dị mfe.
Dan Hellerman, onye isi oche nke App Creation Network kwuru, “Anyị mere Cinefy iji tinye akụrụngwa kacha mma Hollywood kacha arụpụta ọrụ n’aka onye ọrụ. "Ikike ụlọ ọrụ iji kwalite ụdị ha, site na inye ndị ọrụ ikike ikike mmetụta dị iche iche metụtara ihe ngosi ha ma ọ bụ egwuregwu ha, bụ ngwa ahịa na-agbawa agbawa."
Na Cinefy, ngwungwu nke ọ bụla ma ọ bụ nke akara aha dị maka nbudata ngwa, na-enye TV na ụlọ ọrụ egwuregwu egwuregwu iji nwee ike ịzụ ahịa ihe ọhụrụ n'ụzọ na -emepụta njikọta na-akpali akpali na oke mgbasa ozi mgbasa ozi.
Egwú nke Enyi na Enyi esoro Chairseven na App Creation Network iji nye Cinefy ohere inweta ya klaasị zuru ezu nke nwebisiinka-kpochapụrụ egwu ezubere iji mepụta ụda zuru oke, dị site na Cinefy wuru na otu-pịa ikikere. Egwuregwu Enyi na Enyi bụ nchịkọta egwu egwu izizi emere maka ọdịnaya ndị ọrụ na-eme, na-enye 100% egwu na ikike niile - egwu egwu maka nkeonwe na usoro mgbasa ozi n'ịntanetị.
Wuru na-elekọta mmadụ, Cinefy uche mbupụ ozugbo na Facebook, Youtube, na Vimeo. Ọzọkwa, ọrụ nwere ike ịzọpụta multiple oru ngo faịlụ na mbupụ ha ngwaọrụ igwefoto mpịakọta. N'ọdịnihu, Cinefy ga-enweta ma iPad na gam akporo ngwaọrụ, ọ ga-enye ndị ọrụ ohere ịnweta mmetụta ebudatara na ngwaọrụ ọ bụla.
Cinefy's isi edezi technology dị maka ọcha-labelụ ikikere maka ụlọ ọrụ ahịa na-achọ na-ewu na-akwalite ha onwe ha video ebipụta nyiwe. Maka ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị nkwalite, ngwungwu Cinefy nwere ike ịnwe n'etiti ụdị eserese ngosi iri na ise ma ọ bụ eserese eserese, enwere ike kesaa dịka nbudata na akwụghị ụgwọ. A pụkwara ịhazi ngwugwu mmetụta iji nwee ihe nkwado ndị ọzọ iji kwalite mkpọsa ọsọ ọsọ ma ọ bụ asọmpi vidiyo nke onye ọrụ na-emepụta.
Tags: imirikitiedeziiphonengwa iphonenkiriedezi ihe nkiri
Nov 29, 2011 na 2:26 PM
Nke a bụ ọdịnihu nke akwụkwọ akụkọ, ime ihe nkiri, ịkọwapụta, na onye ma ihe ọzọ. Mgbanwe egwuregwu niile. Daalụ maka ịkekọrịta 🙂
Nov 29, 2011 na 4:59 PM
Odoghi anya na mmadu obula huru ubochi anyi gha enwe ike n’aka anyi!
Nov 29, 2011 na 6:12 PM
Anyị nwere ekele maka isiokwu ahụ, yana okwu ọma sitere na Doug na Zoomerang. Anyị kwenyesiri ike na nke a bụ ọdịnihu nke vidiyo mmekọrịta. Anyị na-eche 2012 ga-afọ nke ika na-elekọta mmadụ media, na anyị na-atụ anya Cinefy nwere ike inyere-eduga ụgwọ!
Nov 29, 2011 na 8:54 PM
Mma! Anwalebeghị m nke a, mana ọ dị ka nnukwu ụzọ iji weghara ụda dị elu yana vidiyo gị (ma nye gị nkwụsi ike karị) http://www.amazon.com/Fostex-Audio-Interface-Iphone-AR-4I/dp/B005DNAB12
Nov 29, 2011 na 9:10 PM
Anya dị ka otu Heck nke a na ntọlite! Achọpụtara m na ndị na-ebi akwụkwọ na-erekwa anya m dị elu nke na-arịgo na iPhone. Ihe nzuzu!